Xubin Cusub Ikarusc42
Xubin Cusub Ikarusc42 1 sano 10 bilood ka hor #1184
Salaan mid iyo dhamaan. Waxaan maanta ku biiray. Waxaan ahay Hay'adda Hawlgabka Chelsea ee fadhigeedu yahay London UK. Waxaan ku socday siming duulimaad ilaa 1980. Waxaan sidoo kale qabtay Shatiga Duulimaadka Gaarka ah illaa 2016 markii ay qaali igu noqotay inaan duulo. Waxaan ku soo biiray Rikoooo si aan u helo Boeing Osprey laakiin ma awoodo inaan ka soo dejisto nidaamka shirkadeedkeena ee IT maxaa yeelay ma oggolaanayaan dekedaha 8080 ama 8888.
Ma jiraa qof soo jeedin kara hab aan ku heli karo Osprey ??? Waad ku mahadsan tahay filashooyinka.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.349